Apple ရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ အနုပညာ - PX
Apple ရဲ့ ဖန်တီးမှုနဲ့ အနုပညာ
ဒီကိစ္စကို လူအတော်များများ သတိထားမိကြမှာပါ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်အလွန် Steve Jobs လက်ထက်က Apple ဟာ “ဖန်တီးမှု အနုပညာ” ပိုင်းမှာ အမြင့်မားဆုံး Company တစ်ခုအနေနဲ့ အသိအမှတ်ပြုခဲ့ကြတာပါ။
မြင်တွေ့နေကြ ရိုးအီလှတဲ့ PC Design တွေကို iMac နဲ့ ချေဖျက်ပြနိုင်ခဲ့တယ်။ iPod ဟာ အဲဒီခေတ် Portable Music Player ရဲ့ အထွတ်အထိပ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ Physical Key တွေပါမှ ဖုန်းလို့ယူဆတဲ့ခေတ်မှာ Touch Screen သီးသန့် Smartphone တွေနဲ့ အံ့အားသင့်စေခဲ့တယ်။ iTunes လို Streaming Software နဲ့ Music Copyright ပိုင်းကို လျှော့ချနိုင်ရုံမက ခိုင်မာတဲ့ Online Music Library တစ်ခုအဖြစ်ပါ ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တယ်။ နောက်ဆုံး iPad လိုမျိုး Device နဲ့ Tablet တစ်ခေတ်ကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့တယ်။
အဲလို Innovative ဖြစ်တဲ့ Brand တစ်ခုဟာ နောက်ပိုင်းနှစ်တွေ၊ အထူးသဖြင့် ကမ္ဘာ့တန်ဖိုးအကြီးဆုံး Tech Company အဖြစ်ရောက်ရှိချိန်၊ Steve Jobs အလွန်နောက်ပိုင်းမှာ Apple အနေနဲ့ နည်းပညာလောကကို အံ့အားသင့်ရလောက်တဲ့ ဖန်တီးမှုတွေ ထုတ်ပြနိုင်စွမ်းလျော့လာတာတွေ့ရတယ်။ တစ်ဖက်မှာ Android ဖုန်း Company တွေ သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် နည်းပညာတွေချပြနေကြချိန်မှာ Apple အနေနဲ့ သူနဲ့မဆိုင်သလို တုံဏှိဘာဝေ လုပ်နေတာဟာ အမာခံ Fan တွေအတွက် အတော်စိတ်အလိုမကျ ဖြစ်စရာပါ။ ဒီနေ့မှာတော့ အဲဒီနောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းတစ်ချို့ကို လေ့လာမိသလောက် အစဆွဲထုတ်ပြောပြပေးသွားပါ့မယ်။
– Apple & Google
Apple အကြောင်းပြောမယ်ဆိုရင် Google နဲ့နှိုင်းယှဉ်ချက်က အနည်းအကျဉ်းတော့ ပါကိုပါရမှာပါ။ မတည့်အတူနေ ကြောင်နဲ့ကြွက်လိုပဲ Apple နဲ့ Google ဟာ ရည်မှန်းချက်ကွဲပြားတဲ့ လားရာတူ ခရီးသွားတွေလိုပါပဲ။ နှစ်ဦးစလုံးက Premium Product, OS, Accessory & Ecosystem ကိုယ်စီ တည်ဆောက်ချင်နေကြသူတွေချည်း။
Ecosystems of Apple, Microsoft and Google
ဒါပေမယ့် ကွဲပြားချက်က Apple ဟာ Hardware ပိုင်းကို Origin ယူ၊ အသားပေးတည်ဆောက်လာတဲ့ Company ဖြစ်ပြီး Google ကတော့ Internet Service (အထူးသဖြင့် Software) ကို အားပြု ပြီး ထိပ်တန်းကိုရောက်လာသူပါ။ သူတို့ Target ထားတဲ့ Customer Segment ပိုင်းမှာလည်း ကွာခြားမှုရှိနေတယ်။
ခုလိုနှိုင်းယှဉ်ဖော်ပြနေရခြင်းအဓိကအကြောင်းရင်းက Apple ရဲ့ Innovation ပိုင်းလျော့နည်းလာမှုဟာ Google ရဲ့ Android ဘက်က Innovation မြင့်တက်မှုနဲ့ သွယ်ဝိုက်ဆက်နွယ်နေတာကြောင့်ပါပဲ။ ဒါဆို သူတို့ကြားက ဆက်နွယ်မှုက ဘာလဲ?
သူနိုင်၊ ကိုယ်နိုင် အပြိုင်ကြဲချိန်တုန်းက Apple ဟာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ခြေတစ်လှမ်းမက အသာရအောင်လုပ်ပြနိုင်ခဲ့ပေမယ့် တန်ဖိုးကြီး Brand တစ်ခုဖြစ်လာချိန်မှာတော့ အခြေအနေတွေဟာ အများကြီးပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီ။ Fan တွေရဲ့ Apple အပေါ် မျှော်လင့်ချက်၊ လိုချင်တောင့်တမှုတွေက တဖြည်းဖြည်း ပိုကြီးမားလာတယ်။ ဘာမဟုတ်တဲ့ အမှားလေးတစ်ခုကလည်း Brand Image ကို သိသိသာသာထိခိုက်စေနိုင်လာတယ်။ အဲလိုအချိန်မျိုးမှာ မပြည့်စုံတဲ့ဖန်တီးမှုတစ်ခုဟာ Company အတွက် အကောင်းထက်အဆိုးဘက်ကို ပိုပြီးဦးတည်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သူတို့ကောင်းကောင်းသိနေလို့ပါပဲ။
တစ်ဖက်မှာလည်း Android OS သုံးတဲ့ Phone Company တွေဟာ တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာတယ်။ အဲဒီအတွက်မတူညီတဲ့ လူတန်းစားအလွှာအမျိုးမျိုးကနေ User Information နဲ့ Feedback တွေပိုပြီးရလာတယ်။ Google အနေနဲ့ အဲဒီ Feedback တွေကနေ လိုအပ်တာတွေပြင်ဆင်ပြီး ပိုကောင်းတဲ့ OS Version တွေကို ဖန်တီးနိုင်လာသလို ပြိုင်ဆိုင်မှုပြင်းတဲ့ Android ဈေးကွက်မှာလည်း Company တွေက သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် Customer အကြိုက် တီထွင်ဆန်းသစ်မှုတွေလုပ်လာကြတယ်။ ဒီတော့ Apple အနေနဲ့ Resource ဘယ်လောက်ကောင်းနေပါစေ ဘက်ပေါင်းစုံမှာတိုးတက်အောင် Cover up လုပ်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်လှပါဘူး။
– Innovation & Perfection
Apple နဲ့ Google ဟာ မတူညီတဲ့ရှုထောင့်ကိုယ်စီနဲ့ ဖန်တီးမှုတွေကို ချဉ်းကပ်နေကြတာပါ။ Android OS အနေနဲ့ Open Source ဆိုတဲ့အားသာချက်အောက်မှာ လူကြိုက်များလောက်မယ့် Function တွေကို Beta Program တွေနဲ့ User တွေဆီစိတ်ကြိုက်ပို့၊ မလိုဘူးထင်တာကို စိတ်ကြိုက်ဖြုတ် စတာတွေကို လိုသလိုလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ Phone Company တွေအနေနဲ့လည်း သူတို့စမ်းသပ်ချင်တဲ့ Hardware ပိုင်းတွေကို Flagship Series တွေမှာ မသုံးခင် အစမ်းသဘောအနေနဲ့ Mid-range Series ဒါမှဟုတ် Series အသစ်တစ်ခုထုတ်ပြီး ထည့်ပေးတာ၊ ရပ်ဆိုင်းတာကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိနေတယ်။
Apple တွက်ကတော့ ဒါတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါပဲ။ သူ့ရဲ့ Experimental Function အတော်များများကို သူတို့ Company အတွင်းမှာပဲ လျှိ့ဝှက်ထားလေ့ရှိပြီး အဲဒီထဲကမှ အဆင်အပြေဆုံးနဲ့ Error အနည်းဆုံးဖြစ်လောက်မယ့်အရာကိုမှ သူတို့ရဲ့ Latest Model တွေနဲ့အတူ ပွဲထုတ်တာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါကလည်း Premium Product တစ်ခုအပေါ် Stable ဖြစ်ပြီး Smart ကျတဲ့၊ သုံးရလွယ်ကူတဲ့ Feeling မျိုးကိုမှ လိုချင်တတ်တဲ့ သူတို့ Fan တွေရဲ့ဆန္ဒကို အလိုက်သိနားလည်မှုလို့ဆိုရမှာပါ။ ဒီတော့ Apple ဟာ အရင်ကလို Innovative Brand တစ်ခုဆိုတာထက် သူတို့ချပြမယ့် Function သစ်ကို Error ကင်းနိုင်သမျှကင်းပြီး Maximum Performance ကို ပေးစွမ်းနိုင်မယ့် Perfection လိုင်းကိုပဲ ဆက်ပြီးဦးတည်သွားဖို့ရှိနေပါလိမ့်မယ်။
“ကူးချတယ်” ဆိုတဲ့စကားဟာ Smartphone နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Terms တွေထဲမှာ ကျွန်တော် မနှစ်မြို့ဆုံးပါ။ နည်းပညာပိုင်း၊ Design ပိုင်း အပြန်အလှန်မှီခိုမှုဆိုတာ Company တွေအချင်းချင်းမှမဟုတ်၊ Apple တို့ Google တို့မှာလည်း မလွတ်ကင်းနိုင်တဲ့ကိစ္စပါ။ Perfection ဆိုတဲ့အတိုင်း အသုံးဝင်တဲ့ Apple ရဲ့နည်းပညာတစ်ချို့ဟာ Google ဘက်က လက်တည့်စမ်းထားတဲ့ Project တစ်ချို့ပေါ် အခြေပြု ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ဖန်တီးထားတာတွေ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ OS ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်း Android ဘက်မှာ ရနေတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ Feature လေးတွေ iOS မှာ ပြန်ပြီးပါဝင်လာတတ်တယ်။
Google ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Apple ရဲ့ နည်းပညာနဲ့ Strategy တစ်ချို့ကို ပြန်အတုယူရတာပါပဲ။ သူတို့ OS အတွက် အကောင်းဆုံး Optimization လုပ်နိုင်မယ့် Nexus, Pixel တို့လို Hardware တွေ ဖန်တီးလာတာ၊ Apple လို ကိုယ်ပိုင် Ecosystem တစ်ခုဖန်တီးဖို့ စိုင်းပြင်းလာတာ၊ ပြောင်းလဲလာတဲ့ Android OS ပေါ်က Feature တစ်ချို့ စတာတွေဟာလည်း Apple ရဲ့ Influence မကင်းလှ။ Trend တစ်ခုအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လဲ Camera ဒေါင်လိုက်၊ Notch Design ကအစ Color ရွေးချယ်မှုအပိုင်းထိ ကြိုက်သည်ဖြစ်စေ၊ မကြိုက်သည်ဖြစ်စေ Apple ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုအနဲနဲ့အများ ပါဝင်နေတာပါပဲ။
ဒီတော့ အနှစ်ချုပ်ရရင် Apple ရဲ့ Innovation နည်းပါးလာခြင်းဟာ Apple ကိုယ်တိုင် ပိုပြီး Safe ဖြစ်မယ့်လမ်းကြောင်းကို ရွေးချယ်လာတာကြောင့်ဖြစ်သလို Android Phone Company တွေတိုးပွားလာမှုနဲ့လည်း သက်ဆိုင်နေပါတယ်။ 2006 ဝန်းကျင်လောက်မှာ Innovative Leader ဖြစ်အောင်ကြိုးစားခြင်းဟာ မှန်ကန်မှုဆိုပေမယ့် ခုချိန်လို ပြိုင်ဘက်များလာတဲ့၊ တိုးတက်မှုနှေးလာတဲ့ကာလမျိုးမှာ Innovation ကိုအသားပေးဖို့ဆိုတာ ထိပ်တန်း Company တစ်ခုအနေနဲ့ မိုက်ရူးရဲဆန်တဲ့ကိစ္စ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေမှာပါ။ ဆိုတော့ကာ အသစ်ထွက်လာမယ့် iPhone မျိုးဆက်သစ်တွေ၊ နောင်လာမယ့် Product တွေမှာလည်း Apple ကို Innovation ထက် Perfection & Trend Leader အနေနဲ့သာ ဆက်ပြီးမြင်တွေ့ရဖွယ်ရှိတယ်လို့ ယူဆမိပါတယ်။
“ဈေးသိပ်မကြီးဘဲနဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ ဒီဇိုင်းကောင်းကောင်းပစ္စည်းတစ်ခုကို လူတစ်ယောက်က ဖန်တီးလိုက်ပြီဆိုရင် ကျွန်တော်အရမ်းသဘောကျတယ်”
ဒါက သူ ငယ်စဉ်ဘဝ Califonia မှာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး Steve Jobs ပြောခဲ့တဲ့ မှတ်ချက်စကားလေးပါ။
သူ့အိမ်အပါအဝင် Califonia တစ်ဝိုက်မှာ အိမ်အလုံးပေါင်း ၁၁၀၀၀ ကျော် ဆောက်လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ Joseph Eichler ဆိုတာ Steve Jobs လေးစားခဲ့ရသူတွေထဲ တစ်ဦးအပါအဝင်ပါပဲ။ သူဆောက်လုပ်ခဲ့တဲ့ ရိုးရှင်းခေတ်မှီပြီး သန့်ရှင်းသပ်ရပ်တဲ့ Design နဲ့ ဈေးသက်သာတဲ့အိမ်တွေဟာ Steve Jobs ကို လွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့သလို iMac, iPhone, iPod စတဲ့ Apple Product တွေ ထွက်ပေါ်လာနိုင်ဖို့ တွန်းအားတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုပဲ Steve Jobs ရဲ့လွှမ်းမိုးမှုတွေက အခြားသော ဘယ် Brand တွေကိုလွှမ်းမိုးသွားပြီလဲ???
Xiaomi Mi 10 ဖုန်းက ဘာလို့စျေးကြီးသွားတာလဲ?